Maxaad Record iyo Edit Video ah?
Video lagu qoro aysan lahayn wax u gacan warshadaha warbaahinta sida uu galay arrin caadi ah halkaas oo uu qof si fudud u qoraan karaan video clip ah oo ay la telefoonka gacanta. Waa in si fudud guji feature camera ka dibna bilowdo diiwaan inta aad rabto, xusuusta ee buuxa ama ilaa batariga ee guri (hadba marka hore timaadda). Inkasta oo laga yaabo in la eego xirfad video goobaha ka maqnaato, in dhibaato ah ma, sida ay jiraan ballaaran xulashada tafatirka software video uu ka soo xusho in ujeedooyin tafatirka ka dib.
Kale badan telefoonada gacanta, qaar ka mid ah oo naga mid ah door bidaan in ay isticmaalaan kaamero ama fiidiyo. Taasi waa in aan ku xuso ugu yar, Webcama u tagi online (ie Google Plus) ama teleconferences (ie GoToMeeting ) kuwaas oo labaduba caan ka badan helo. Faraqa ugu weyn ee la isticmaalayo alaabtii kala duwan ama habab si ay u qoraan video a yihiin goobaha video ama gacanta, tayada audio, qaab file, xallinta iyo qoraalana waqti (ama awoodda kaydinta).
Ujeeddooyin ee diiwaangelinta Video ah
Common Hababka Qaybinta iyo Sharing ah Video
Maxaad baahida loo qabo in Edit Video ah?
Sidee-in Record iyo Edit Video ah?
Ujeeddooyin ee duubo Video
In warshadaha ee dhaqanka, waa inta badan nooc ka mid ah baahinta wararka oo si tartiib ah, qeyb ka mid ah madadaalada lagu daray soo galayaa. Isbedel ayaa aad u weyn marka ay timaado in nuucee ah ayaa hadda ka mid ah video duubo (halka aan laga badiyay taabashada xubno ka ahaa ee hore), oo daboolaya ujeedooyinka shaqsi ahaaneed iyo ganacsiga. Tusaale ahaan sida soo socota:
Personal: biireen qaybsiga iyo madadaalada
Seegeen nool warbaahinta ama waqtiga dhabta ah TV show
Kulanka Time sida in ka badan hal show jecel la sii daayey waqti isku mid ah
Dhibcaha Share gameplay ama xeelado xitaa saaxiibada
Ilaalinta log video ah ama joornaal ah safaradiisa, safarada, fasaxyada, xafladaha ama iyo axada, kale
Ujeedooyin jiilka Revenue ama xayaysiis: Business / Ganacsiga
Samee waxbarashada internetka ama offline heli karo wax shir ah iyo kuwa aan u dhigi kara
Guides ku sameeya sida gaar ah ama tilmaamaha sida cunto karinta, hagaajinta iyo dayactirka, navigation software iyo si ka badan
Ka dhig dhaqan archiving caadiga ah iyo sidoo kale kaydinta ah gurmad
Hababka caamka ah ee Qaybinta iyo Sharing Video ah
Hababka caadiga ah ee qaybinta video ah waa iyada oo cable TV-ga, gudbinta digital, satellite iyo Internet. Waa la shaki ku jirin in Internet waa habka ugu doorbiday ah oo dhan. Tani waxaa laga arki karaa iyada oo loo marayo soo kordheyso ee video qaybsiga (koombiyuutarka iyo downloaing) hawlaha guud online video dhufto ee sida YouTube, Netflix, Hulu, Vudu iyo si ka badan.
Idaacadan ayaa haatan ku biiray dadka kale ee badan ee la wadaago waxyaabaha video; ha noqoto shakhsi ahaan ama ganacsi la isticmaalo. Faa'iidada Internet ee ay awoodaan in ay gaaraan koox ka mid ah daawadayaasha ballaaran oo masaafo juquraafi dhiiri users shakhsiyeed iyo sidoo kale ganacsiyada in ay wadaagaan videos isla taasi oo ka uploading clips ku gal ay goobta warbaahinta bulshada jecel.
Sidaas dheer in fursadaha video waxaa lagu taageeray, videos si fudud ayaa gundhig karayaan blogs ama bogagga internetka. On top of in, videos diiwaan sidoo kale la saxar karo ka hor inta aan la wadaago si ay awood loo maqli karo nooca qaar ka mid ah qalabka iyo sidoo kale la abuuro DVD ee. The videos diiwaan isticmaalaya kaamero ama fiidiyo ah waxaa sida caadiga ah lagu kaydiyo waa qaab cayriin (iyo qaab file hooyo), sidaa darteed tirada file weyn oo inta badan la bixiyo karin qaar ka mid ah software video tafatirka.
Sidaa darteed, waxa uu had iyo jeer lagula talinayaa in ay ku cadaadisaa size file iyo badalo qaab faylka hore. Haddii kale, waxaad yeelan doontaa nugul in la joojiyo ilaa qaab Ree inta lagu guda jiro loo maqli aad kombuutarka iyo Qalabka telefoonada gacanta ama ku fashilantay in ay geliyaan files video ee tafatirka (ay sabab u tahay kala duwanaanshaha codec).
Maxaad u baahan tahay in Edit Video ah?
More la soo bandhigi karo sidii guud ah oo loogu talogalay dadka loola jeedo
Delete ama jar Muddooyinka aan loo baahnayn ama clips
Dawaarka ama shakhsiyeeyo sida (tusaale ahaan codsan saamaynta ama kala guurka)
Ku dar sheeko ama cod-badan (sida u videos tutorial ku salaysan)
Turning gallery ah photos galay slideshow ah
Si aad u soo gooyay xayaysiisyada ama commercials ka cajallado
File riixo size ama qaab beddelidda,
Qoraaga, la abuuro oo DVD ah gubi (ama softcopy in image file ISO ah)
Iyada oo ku xidhan nidaamka qalliinka aad isticmaalayso, waxaa had iyo jeer ay software ka hor lagu rakibay-video tafatirka ee la socota PC, sidoo kale Windows Kan sameeyey Movie for Windows ama iMovie u Mac . Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah oo idinka mid ah waxaa laga yaabaa in ay furan yihiin ka fiirsaneysa inay u xayiraad aqbasho qaab file iyo xaddidaadda feature ee ay bixiyaan software kala duwan. The Video Converter Ultimate awood u yeelan doonaan in ay ku habboon oo aad u baahan video kasta ka qoro si tafatirka, diinta, degsado iyo sidoo kale qoraalka DVD iyo abuurista.
Sidee loo Diiwaan-iyo Edit Video ah?
Fadlan ka heli hage hoose si aad tixraac ku qoro iyo sixiddiisa video ah on version Windows ah Video Converter Ultimate ah.
1 Ku rakib ka Video Converter Ultimate
Taariikhqorihii video waxaa dhisay-in xirmo Video Converter Ultimate ah. Marka aad soo bixi oo lagu rakibay software-ka, waxaad yeelan doontaa in ay raadiso " Wondershare Video taariikhqorihii "ka BILOWGA button aad kombuutarka Windows-ku-saleysan.
2 Start Rikoodh
Marka labixiyo cas yimaado ilaa aad screen, waxaad riixi kartaa oo ku saabsan REC button si toos ah ama qarka u saaran inay joojiyaan duubay muddo waqti go'an ka dib. Kale oo ka shaqayn duubay, waxa kale oo aad eegi kartaa in ay Download 's tab soo bixi wax kasta oo jecel videos aad, ee yaalla.
3 beeg Settings Video
Si fudud Waxaad sameyn kartaa video aad ka doorteen iyo tayada audio ama goobaha kale ee sida hor diinta file ama guba gal DVD ah.
4 Guba DVD ah
Waxaa jira badan oo foom oo uu ka soo xusho si ay ugu adeegaan aad dooratay iyo sidoo kale fursado kale oo rogrogmi. Taasi tusaale ahaan; in aad is geliso music soo jeeda, sawirka, heerarka TV dooro, muuqa iyo abuuro image file ISO ah.
> Resource > Record > Maxaad Record iyo Edit A Video?